Boorsada boorsada kombiyuutarka
Bacda gogol dhaaf
Bacda dharka dhaq
Gabdhaha cusub ee jeebka jeebka ku haya ...
Mudanayasha qaybta jeebka dheer ...
Mudanayaal Gaarayaal Gaaraya oo Cusub
Mudanayaal fudud oo fudud ...
Wallet Long Wallet Ragga Ragga Yaryar ee Fashionka Classic Buckle Meelkasta Kaarka ah 3 laab laab Litchi Pattern jilicsan Kaarka Wallet Kaarka Wallet
Waxay ka samaysan tahay tayo sare oo bey'ad PU maqaar leh. Qaabka jilicsan ee loo yaqaan 'lichi jilicsan' waa jilicsan yahay, neefsan karo, wuxuu dareemaa wanaag, waxaana lagu nadiifin karaa maro qoyan.
Boorsada jeebka gaaban ee ragga magnetic gaaban
Waxay ka kooban tahay qalab tayo sare leh oo PU ah, naqshad awood ballaadhan leh, waad meeleeyn kartaa sawirro, kaararka bangiga, waraaqaha bangiyada, waraaqaha bangiga, isbadal dabacsan, iwm, xirmooyin mugdi ah oo qarsoon ayaa dhigi kara jeegag muhiim ah, iwm, aamin ah oo la isku halleyn karo.
The cusub USB ku amraya isbeddelka caadada ah boorsada farriinta boorsada jeebka garabka
Jumlad tayo sare leh oo moodada dharka labiska dharka, sheyga dharka nylon-ka ayaa leh astaamaha dawaynta biyaha, iska caabin xoqida iyo caabbinta ilmada.
Boorsada dhegta cusub ee dhegaha lagu dhejiyo ee garaacista garabka-xatooyada booska banaanka banaanka ah
Dhar tayo sare leh oo moodada leh iyo jawi ceyri bey'ad leh, biyo-caddeyn ah, xoq u adkeysi leh oo jeexjeexan. Waxaa lagu naqshadeeyay bac weyn oo weyn iyo baco badan oo shaqeynaya.
Boorsada gacanta, boorsada safarka-masaafada gaaban, boorso sidda jimicsiga
Adduunku ma aha wax la arko, ee waa socod. Boorsada casriga ah iyo moodada safarka ah waxaa laga sameeyay dhar tayo sare leh oo tayo sare leh oo dhar-diid ah, oo ah dhar xiran, cufnaanta sare, neefsashada iyo raaxada. Naqshadda awoodda weyn waxay kaydsan kartaa tiro fara badan oo ah waxyaabo ay ka mid yihiin dharka shakhsiga ah, kombiyuutarrada, taleefannada gacanta, dalladaha, iwm, iyo boorsada hore ee xaashiyaha lagu kaydiyo taleefannada gacanta, kombiyuutarrada kiniiniga ah, silsiladaha muhiimka ah iyo waxyaabo kale oo si fudud loogu isticmaali karo markasta. waqti.
Sanduuqa kaydinta miyuusikada la qaadan karo ee mugga weyn
Boorsada lagu qurxiyo ayaa laga sameeyay qalab tayo sare leh oo PU matte ah, oo raaxo leh in la taabto isla markaana leh saameynta biyuhu aanu lahayn iyo xariir iska caabin ah. Qaabka wareega, midabada kala duwan ee adag, midabada, waxyaabaha la isku qurxiyo ee maalinlaha ah, buskudka liinta, alaabada daryeelka maqaarka iyo burushyada ama waxyaabaha kale ee yaryar ee loo baahan yahay markaad safrayaan. Ku habboon in lagu meeleeyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyo waxyaalaha la kaydiyo.
Kaydinta sanduuqa kaydinta dahabka leh ee la qaadan karo
Naqshad gaar ah oo qaas ah, adoo isticmaalaya agab tayo sare leh oo bay'ad PU ah, xulasho gudaha ah oo jilicsan oo jilicsan, heer sare, dabeecad sharaf leh. Waxaa jira qaybo badan oo gudaha ah, kuwaas oo ku habboon keydinta fardaha, qoorta, bushimaha, garka, saacadaha, iwm., Oo kuu oggolaanaya inaad wax kala soocdo oo aad kaydiso alaabada.
Boorsada Laptop-ka ragga iyo dumarka buugga xusuus qorka ganacsiga
Alaabada tayo sare leh: Bannaanka shandaddiisa laptop-ka waxaa laga sameeyay dhogor-biyo-xaabin ah oo tayo-sare leh oo ah Oxford fiber, gudahana waxay ka samaysan tahay maro jilicsan oo jilicsan.
Biyo-xireenka kulul ee iibka-biyo-xireenka ee PU-da ee ragga ayaa ah boorsooyinka banaanka ee jaamacadda ee Ingiriiska oo dibedda lagu raaxeysto
Iyada oo leh naqshad isku mid ah, boorsadan laptop-ka ayaa leh qol weyn oo ballaadhan oo qaadi kara laptops ka hooseeya 15.6 inji, iyo sidoo kale buugaag, dhar, iyo waxyaabaha kale ee maalinlaha ah.
Boorsada boorsada gacanta ee ragga iyo dumarka iyo boorsada shaashadda
Shayga No. ywssd-002 Waxyaabaha Oxford maro maro Daboolista furitaanka Qaababka biyaha-celceliska, wasakhaynta, xarkaha u adkaysata, naxdinta u adkaysata jinsiga / dhexdhexaadnimada ragga iyo dumarka Model fudud-wareegga afka Nooca jaakad jilicsan Muuqaal Kufiyeed jilicsan Qaabka qaabka Nooc fudud Sifo-Nooc fudud - Round Afka-Gray, Nooc fudud - Round Afka-Pink, Nooc fudud - Round Afka-buluugga ah, Nooca fudud-Round Afka-madow Cabbirka 1 ...
Boorso boorsada kumbuyuutarka gacanta lagu qaato ee garabka lagu kari karo
Qolka 'multifunctional', boorsadan kombiyuutarka waxaa ku jira jeebado badan oo gudaha ah iyo jeebado dhinacyo badan ah, kuwaas oo ku siin kara boos gooni ah laptopkaaga, taleefanka gacanta, iPad, furaha, boorsada, guntiga, buugaagta, dharka, dhalada, iwm Si fudud u hel waxa aad rabto. Jeebka hore wuxuu ku hayn karaa alaabtaada si fudud oo fudud.
Mudanayaal jeebka dheer dherer balaaran karti balaaran laba jibaaran xaashi jeex jeexan dumarka boorsada xajmiga xajmiga leh
Qalabka-xajmiga ah ee laba-zip xajmiga weyn wuxuu ka kooban yahay tayo sare oo bay'ad PU bay'ad leh. Biyo-diid, qoyaan-caddeyn, quruxsan, muuqaal dhammaystiran, midabbo badan, waara, dareen wanaagsan, ayaa lagu nadiifin karaa maro qoyan.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. ,